Xhumana noMvikeli woMphakathi | Local Government Action
Xhumana noMvikeli woMphakathi
IHhovisi likaMvikeli woMphakathi (PPO) linguphiko oluzimele oluqaphayo olwasungulwa ngokweSahluko 9 soMthethosisekelo. Linamandla okwenza uphenyo ngokungalungile (ukwenza okungalungile) kunoma oluphi uhlaka lukahulumeni, okubandakanya uhulumeni wasekhaya futhi kufanele libike ngolokhu emphakathini. Okungalungile okwenziwa abasebenzi bahulumeni okubandakanya ukuhlukumeza, ukudelela noma ukuziphatha kabi, ukubambezeleka okungafanele, nokungathembeki ngezimali zikahulumeni, ukuzicebisa okungekho emthethweni kanye nezinye izinhlobo zokuphatha ngendlela engafanele.
Uma uzofaka isikhalazo kufanele kube wukuthi ubika ngenkinga eneminyaka engengaphezu kwemibili yenzekile, yize i-PPO ingasengezela lesi sikhathi ezikhathini ezikhethekile. Akuzona zonke izinsolo eziholela ekwenziweni kophenyo. I-PPO ingakhetha ukuthi yini ezokwenza uphenyo ngayo, noma ilungelo, lokukhetha ukuthi uzothatha izinyathelo uma sekutheni.
Ngaphezu kokwenza uphenyo ngezenzo ezingafanele ezenziwa uhulumeni, uMvikeli woMphakathi usebenza:
njengomxhumanisi wezicelo ngaphansi kwe-PAIA
njengompheyi/umxhumanisi/umeluleki wokuxazulula izimpikiswano ngaphansi koMthetho wokuDalula okuVikelekile.
UMvikeli woMphakathi unamandla okuphenya avulekelekile okubandakanya namandla okuyalela ofakazi ukuthi bafakaze befungile noma ukuthi baveze noma omuphi umbhalo nokuthi kucwaningwe futhi kuphucwe impahla ebhalwe ephepheni eligunyazayo. Ukuhluleka ukusebenzisana ne-PPO kuyicala lezobugebengu.
I-PPO ingase ikhethe ukusebenza njengomxhumanisi, ilethe ukubuyisana, ixoxisane nani ngezisombuluko, noma ukuphenya futhi yethulele umphakathi ekutholile, kanjalo nokuncoma ukuthi kubekwe amacala ezobugebengu.
UMvikeli woMphakathi unamahhovisi angama-20 eNingizimu Afrika iyonke. ImiSebenzi yoMvikeli woMphakathi ayikhokhelwa.
Inombolo yoMvikeli woMphakathi yamahhala ithi: 0800 112 040